दीपक मनाङेले गरे पत्रकार सम्मेलन, भन्छन- ठगलाई न’कुटेर फुलमाला लागाउ ? – Khabarhouse
दीपक मनाङेले गरे पत्रकार सम्मेलन, भन्छन- ठगलाई न’कुटेर फुलमाला लागाउ ?
Khabar house | ८ माघ २०७६, बुधबार १५:३५ | Comments
काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई झा’पड हा’न्‍नै पर्ने भएर हा’नेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बुधबार पोखरामा पत्रकारसम्मेलन गरेर मनाङेले ठ’गलाई सबक सिकाउन झा’पड हा’नेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। ‘यो मान्छे ना’मुद ठ’ग रै’छ। मैले एक झा’पड हा’न्दिएँ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री कप भइरहेको छ।
यसलाई मुख्यमन्त्रीले हा’न्‍नुपर्ने मैले पो हा’नेँ।’ मंगलबार देखि सुरु भएको गण्डकी प्रदेश स्तरीय मुख्यमन्त्री कप लिग फुटबल प्रतियोगिताको उ’द्घाटन अघि उनीहरू दुईबीच भ’नाभन भएको थियो। सांसद गुरुङले प्रतियोगितामा स’हभागी मनाङको फुटबल टिम लाई आयोजकले खाने, बस्ने, खेल मैदानको व्यवस्था नगरेको भन्दै मु’क्का हा’नेका थिए। ‘झा’पड हा’न्न हुन्थेनभन्ने प्रश्नमा उनले भने- ए बाबा झा’पड हा’न्ने कुनै नि’काय हुन्छ’।
‘मलाई यसलाई कुट्दा राम्रो लागेको छ,’ उनले भने, ‘ठ’ग्नेलाई कु’ट्दा मजा लाग्छ । उनले भने ठ’गलाई न’कुटेर फुल माला लागाउ ? उसले प्रहरीकोमा जा’हेरी दिए, ५० वटा जा’हेरी दिन्छु।’ उनले हिजो एन्फा के’न्द्रका अध्यक्ष कर्मा छिरिङलाई न’भेटेर न’कुटेको प्रतिक्रिया पनि दिए। ‘आज मेरो रि’स म’रिसक्यो हिजो मैले कर्मा छिरिङलाई हा’न्थेँ, अनि उही कर्माले बनाएको ठ’ग अध्यक्ष पर्‍यो।’
उनले एन्फाका अध्यक्ष गुरुङले गतवर्ष भएकाे मनकामना केबलकार कपका विजेताहरूलाई पुरस्कार नदिएकाे आ’राेप पनि लगाए। त्यस्तै उनले खेलकाे टा’इसेट बनाउँदा मि’लिमताे गरेकाे आराेप पनि लगाए। ‘टाइसेट बनाउने पनि नियम हुन्छ। एन्फाका जिल्लाका अध्यक्षहरू ब’सेर बनाउनु पर्छ उसले एकलाैटी बनाएकाे छ,’ उनले भने, ‘टा’इफिक्सिङ पहिलाे पटक देख्दै छु।’